Maxamed Cabdi Gaandhi oo ka Qayb Galay Shalay Shir Qarsoodi ah, oo Shirqool ah, Ayna Soo Qaban Qaabiyeen Kooxda Jwxo-shiil – Rasaasa News
Jun 14, 2010 Ayna Soo Qaban Qaabiyeen Kooxda Jwxo-shiil, Maxamed Cabdi Gaandhi oo ka Qayb Galay Shalay Shir Qarsoodi ah, oo Shirqool ah
Jubbaland iyo Beelaha Absame oo ku fashilmay siyaasda Jubbooyinka ee loogu kaadinayey in karkaarka lagu waydaariyo kooxda mayalka adag ee Al -shabaab, ka dib kolkii uu lugta ku martay Maxamed Cumar Cismaan [Jwxo-shil]
Warar aan ka helay ilo xog ogaal ah ayaa sheegaya in shalay gabal dhicii ay kulmeen koox daba kiintaarta Jwxo-shiil iyo Maxamed Cabdi [Gaandhi]. Shirkaas oo aan la shaacinin codsi ka yimid Gaandhi dartee waa sida la sheegaye.
Shirka ayaa waxaa isugu yimid baa la yidhi dad aan badnayn oo ay soo xusheen kooxda daba kiintaara Jwxo-shiil. Waxayna wararku sheegayaan in dadka shirka yimid ay ahaayeen dad kooban, sababtuna waxay tahay dadkii loo yeedhay oo dhamaantood diiday in ay yimaadaan shirka.
Sababta diidmada ayaa waxaa ugu wacan baa la leeyahay, shirka waxaa qabtay kooxda Jwxo-shiil daba kiintaarta. Sida la sheegay Gaandhi oo taagero badan ka haystay dadweynaha gabalda Jubooyinka ayaa waxaa uu baryahanba doondoonayay danaha beelaha Absame, dadkuna aad bay u xiisaynayeen hogaankiis, waxaase laga qash dhacay baa la leeyahay, ka dib kolkii uu dabada la galay Jwxo-shiil, oo ay ummada Somalida Ogadeeniya maanta ayna arki karin Jabiyeyna Jwxo.
Dharaar dhawayto ayaa waxaa laga dhawaajiyey in Gaandhi uu u gacan galay Kooxda Jwxo-shiil, dadkuse hadalkaas ma ayna rumaysanin waxayna u arkeen in uu yahay war internet, balse maanta ayey cadaatay in Gaandhi u gacanta u galay Kooxda Jwxo-shiil, arintaas oo saamayn wayn ku yeelan doonta siyaasada gabalada Jubooyinka.
Jwxo-shiil, ayaa isagu gaadhay ujeedadii uu kulanka ka lahaa, taas oo ahayd in uu iska horkeeno ummada u dhalatay gabalda Jubooyinka iyo dhaqdhaqaaqyada ay dibada ka wadaan. Arintaas oo hadii ay hirgasho uu Jwxo-shiil daaqada ka bixi lahaa cid qaaraan siisana uusan heleen, waxaana jira warar sheegaya in qaaraanka ugu badan ay Jwxo-shiil siiyaan dadka ka soo jeeda gabalda Jubooyinka iyo waliba keenya, sababta ay ku dhacdayna wali lama garan karo.
Gaandhi, ayaa sida la sheegay shirkii shalay ka dib u duuli doona Kenya, halkaas oo la sheegay in ay beelaha Absame kala horiman doonaan kalsooni daro.
Sababtuna waxaa weeyey waxaa jirtay baa la yidhi dalad balaadhan oo Jaaliyad ah oo lagu magacaabo Midowga Jaaliyada Jubaland oo xoog ku leh dalalka reer galbeedka, Jaaliyadaas oo aad looga taageersan yahay Bariga Afrika. Waxaase yaab leh in mid uu Jwxo-shiil ka dambeeyo ay la looltanto Jaaliyada caanka ah ee Midowga Jaaliyada Jubaland.
Sidase la sheegay Gaandhi waxaa uu la kulmay dhalinyaro iyo koox hawl gab ah oo uu Jwxo-shiil, uruuriyey oo uu ku sheegay in ay yihiin Jaaliyada Jubaland. Jaaliyadan oo la dhisay muddo labo bilood gudaheed ah ayaa waxaa laga badalay inta la ogg yahay saddex gudoomiye, ugu dambayntiina madax looga dhigay wiil la yidhaahdo Cabdi Gaabo, oo reer Kismaayo ah ayna ilmo adeer yihiin ninka madaxda ka ah Midowga Jaaliyada Jubland.
Isku soo duub oo waxaad moodaa in gabalda Jubooyinka oo xiliyadan ay is muujiyeen dhalinyaro ka damqatay dhibaatada haysata dadweynaha Jubooyinka, in loo mijin qabtay ururka Al shabaab iyo intii awal hore xooga ku haysan jirtay gabalda Jubooyinka.
Sida la saadaalinayo, werarka ay Itobiya iyo Maraykanaka oo wada jira ku qaadi doonaan damayaaqada Jilaalkan koonfurta Somaliya, si looga fara maroojiyo Ururada Islaamiyiinta ah. Gabalada Jubooyinka ayaa waxaa u sharaxan hogaanka Jubooyinka Bare Hiiraale oo ah ninkii hore u xukumi jiray gabalada Jubooyinka saaxiib dhawna la ah dalka Itobiya.
Arintaas oo sida ay siyaasadu tahay ay kalifayso luminta fursadii la siiyey dadweynaha u dhashay gabalada Jubooyinku in ay is uruuriyaan oo ay u diyaar garoobaan haraatida lagu dhufan doono Al shabaab iyo ururada Islaamiyiinta ah, oo aad moodo in ayna tabarteed iyo ismaqalkeed midna lahayn.
Waxaana la saadaalinayaa in dad aad u badan oo qaxooti Somaliyeed ah ay u gudbi doonaan dhamaadka sanadkan dalalka Itobiya iyo Kenya.
Qoraalkani waxaa uu ka turjumayaa aragtida Qoraaga